कोरोना भाइरस सम्बन्धी १० भ्रम र सत्य - Sarokar Khabar
२९ माघ २०७६, बुधबार १२:३२
२९ माघ २०७६, बुधबार १२:३२0
कोरोना भाइरसको संक्रमण हरेक दिन बढ्दो छ । चीनको हुबेई प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोनाको संक्रमण २५ भन्दा बढी राष्ट्रमा फैलिसकेको छ । विश्व समुदायले निकै चासोका साथ नियाली रहेको कोरोना भाइरसको विषयमा अहिले विभिन्न बहस तथा अनुसन्धान भइरहेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण र बच्ने उपायलाई लिएर पछिल्लो समय उठेका विभिन्न १० जिज्ञासालाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले स्पष्ट पारेको छ ।
यो सुरक्षित छ । चीनबाट प्राप्त गर्ने विभिन्न पत्र र प्याकेजहरुबाट कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम छैन । कोरोना भाइरस लामो समयसम्म जीवित नरहने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
कोरोना भाइरसबाट घर पालुवा जनावर संक्रमित भएको प्रमाण हालसम्म भेटिएको छैन । तर उनीहरुको सम्पर्कपछि साबुन पानीले राम्रोसंग हात धुनु आवश्यक छ । जसले विभिन्न व्याक्टेरियाका कारण हुने रोगहरुबाट पनि बचाउँछ ।
निमोनिया विरुद्धको खोप, हिमोफिलस इन्फ्लुएन्जा बी विरुद्धको खोपले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउँदैन । यो भाइरस नयाँ भएकाले यसको लागि नयाँ र यसै विरुद्धको खोपको आवश्यक पर्छ । अध्ययनकर्ताहरुले हाल देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्धको खोपको विकास गर्दैछ । यसका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले समर्थन गरेको छ ।
स्लाइनको सहयोगमा नियमित नाकको सरसफाई गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउने हालसम्म कुनै प्रमाण भेटिएको छैन । तर यसले सामान्य रुघाखोकीबाट भने बचाउन मद्दत गर्छ ।
मुखको सरसफाईले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउने हालसम्म कुनै प्रमाण भेटिएको छैन । केही माउथवासले मुखमा रहेका किटाणुबाट केही मिनेटसम्म सुरक्षा प्रदान गरेपनि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट भने जोगाउँदैन ।
लसुन एक स्वथवद्र्धक खाने कुरा हो । जुन एन्टीमाइक्रोबेलले भरिपूर्ण हुन्छ । तर लसुन खानाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउने कुनै प्रमाण छैन ।
तिलको तेलले कोरोना भाइरसलाई मार्दैन । यसमा भएको केही रासायनिक तत्वले कोरोना भाइरसलाई सतही रुपमा मार्न सक्छ । यसमा किटाणुनाशकमा आधारित ब्लीच÷क्लोराइन, ७५ प्रतिशत इथानल, पारासेटिक एसिड र क्लोरोफर्म मिसाइएको हुन्छ । त्यसलै यो तेल छालामा लगाउने या नाकको तल राख्नुभयो भने सायद यसले भाइरसलाई थोरै या प्रभाव नै नपार्ने हुन सक्छ । तर यो रासायनिक छालाको लागि भने खतरनाक हुन सक्छ ।
८. के कोरोना भाइरसले वृद्धवृद्धालाई असर गर्छ? या युवाहरु पनि यसको जोखिममा पर्छन् ?
सबै उमेर समूहका मानिसलाई कोरोना भाइरसले संक्रमण गर्न सक्छ । वृद्धवृद्धा, दीर्घ रोगी ( दम, मधुमेह, मुटुजन्य रोग ) लाई यस भाइरसले गम्भीर खालका बिरामी बनाउन सक्छ । त्यसैले सबै उमेर समूहका मानिस कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न आवश्यक रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव छ । यसका लागि हातको सरसफाई र सही तरिकाले श्वासप्रश्वासको सरसफाईमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
एन्टीबायोटिकले भाइरस विरुद्ध काम गर्दैन । यो ब्याक्टेरिया विरुद्धका लागि मात्र हो । हाल देखिएको यो नयाँ कोरोना भाइरस हो । त्यसैले यसको रोकथाम या उपचारका लागि एन्टीबायोटिकको प्रयोग हुँदैन । यद्यपि अस्पताल भर्ना भएका कोरोना भाइरस संक्रमितले एन्टीबायोटिक लिन सक्छन् । किनभने उनीहरुलाई ब्याक्टेरियल संक्रमणको संभावना पनि हुन सक्छ ।
हालसम्म कोरोना भाइरसको रोकथाम या उपचारका लागि कुनै विशेष औषधि उपलब्ध छैन । कोरोना संक्रमित व्यक्तिको उपचार अहिले लक्षणको आधारमा गरिन्छ । केही विशेष उपचार अनुसन्धान अन्तर्गत भइरहेका छन्, जुन क्लीनिकल परीक्षण मार्फत भइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसका लागि भइरहेका विभिन्न अध्ययन र विकासलाई समर्थन गरेको छ ।
स्वास्थ्य खबर पत्रिका बाट साभार
२१ बैशाख २०७८, मंगलवार ००:२८0
सिन्धुली,२१ बैशाख २०७८ जिल्लामा दोस्रो लहरको कोभिड–१९ को सङ्क्रमितको सङ्ख्या ११२ पुगेको छ । जिल्लामा सोमवार भएको स्वाव जाँचमा एक डेढ वर्षीय बालिकामा समेत कोभिड सङ्क्रमण देखिएको छ । तिनपाटन गाउँप
१७ जेष्ठ २०७७, शनिबार १०:४६0
सिन्धुलीको पहिलो कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज
सिन्धुली, १७ जेठ २०७७ सिन्धुली घर भाई काठमाण्डौमा कोरोना भाइरस संक्रमित एक महिला आज निको भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनु भएको छ । अस्पतालको उपचारपछि निको भएर आज डिस्चार्ज हुनु भएको हो । अस्पतालबाट डि
केशव देवकोटाद्धारा केन्द्रिय सदस्यको उम्मेदवारी घोषणा २९ माघ २०७६, बुधबार १२:३२
गुट रहित पार्टी बनाई जिल्लामा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउछु : पोख्रेल २९ माघ २०७६, बुधबार १२:३२
कविता : दिउ अरुलाइ नै दोष दिउ ! २९ माघ २०७६, बुधबार १२:३२
सेवा निवृत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सम्मानित २९ माघ २०७६, बुधबार १२:३२
सिलवन्दी टेण्डर आह्वानको सूचना २९ माघ २०७६, बुधबार १२:३२
प्लानद्धारा कोभिड संकट ब्यवस्थापन केन्द्रलाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान २९ माघ २०७६, बुधबार १२:३२
कोभिड–१९ अस्पतालाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान २९ माघ २०७६, बुधबार १२:३२
गोलन्जोरमा कृषकलाई राँगा र बोका वितरण २९ माघ २०७६, बुधबार १२:३२
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुरोध २९ माघ २०७६, बुधबार १२:३२
दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम वितरण २९ माघ २०७६, बुधबार १२:३२